DAAWO-Cabsi Soo Food Saartay Madaxda Somaliland ee Laascaano Ku Sugan Ciidanka Puntland oo Galay iyo Ciidamo La Soo Dhoobay Kantaroolada. – PuntSom – kalasoco wararka
in Wararka, Wararka Somalida June 25, 2018	402 Views
Saqdii dhexe ee xalay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamo katirsan kuwa Puntland oo hab xeeladaysan ku galay magaalada iyo kuwa Soomaaliland.
Dagaalka ayaa hal daqiiqo gudeheeda waxa uu si isku mid ah uga qarxay labo kamid ah saldhigyada ay gacanta kuhayaan ciidamada Soomaaliland, waxaana ay ka bexeen magaalada aroortii hore ee shalay
Wararkii ugu dambeeyey ee aanu xalay ka helnay magaalada Laascaanood aaya sheegaya in Soomaaliland ay heegan gelisey ciidankeeda iyadoo ka cabsi qabta weerar lamid ah kii xalay.
Waxaana aad loo adkeeyey kantaroolada magaalada xarumaha ciidamadu ku sugan yihiin iyadoona ciidamo dheeraad ah la dhigay goobaha ay ku sugan yihiin horjoogayaasha Soomaaliland oo laga cabsi qabo in la weeraro.
Saraakiisha dowladda Puntland ayaa shaaca ka qaaday in ciidanka dowladda Puntland cutubyo katirsan ay gudaha u galeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayna weerar ku qaadeen saddex kamid ah saldhigyada ciidamada Soomaalilabd.
Gudoomiyaha gobolka Sool ee Puntland Mudane Abubakar Cabdiraxmaan Geelle Diiriye oow arbaahinta lahadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey howlgalkaasi oo uu sheegay in lagu soo furtay maxaabiis Somaliland si sharci darro ah ku haysatay.
Goob jooge ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo lahadlay warbaahinta Radio Garoowe ayaa sheegay in weerarku bilowday sagaalkii habeenimo uuna dhammaaday aroortii saaka